चूडामणि वाशिष्ठ Archives - Sajhamanch
२०७७, चैत्र ३० गते बिहानिको ०८:४१:११ बजे Monday 12th April 2021
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनबारे छलफल गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई सोमबार विहान ८ बजे बोलाएको छ । बालबालिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुप (युके भेरियन्ट) को संक्रमण उच्च देखिएको भन्दै कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले संक्रमण बढी भएका स्थानका विद्यालय तथा कलेजहरु कम्तीमा तीन सातासम्म बन्द गर्न…
शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा
पदकमा नयाँ नक्सा नराखेको भन्दै विरोधमा नक्सासहित प्रदर्शन
नेकपा एमालेको संसदीय समितिमा नाम हेरफेरको सिफारिस
निर्वाचन आयोगले फैसला नदिनु विडम्बना : नेता नेपाल
कतार गएका उप्रेती पाँच वर्षदेखि बेपत्ता, खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट एमाले सांसदको नाम फिर्ता
नेप महासंघ चुनावः चारका विरुद्ध ११, कसको पल्ला भारी होला !
तोकिएको समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबै लाग्नुपर्छ : नेता सिंह
सहारा नेपालद्वारा परिवार राहत र मृतक सदस्यको कर्जा मिनाहा
बिर्तामोड । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आज आफ्ना सदस्यहरुलाई परिवार राहत तथा कर्जा मिनाहा गरेको छ । संस्थाको बिर्तामोड सेवा केन्द्र अन्तरगत लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध बिर्तामोड ५ को वुद्ध सहारा महिला समूह नं. २० का सदस्य सुमनदेवी दासको मृत्यु भएकाले निजको नाममा रहेको १२ लाख रुपैयाँ कर्जा मिनाहा गरिदिएको छ । सहारा नेपाल साकोस बिर्तामोड सेवा केन्द्रका…
एनएमसी चिया व्यवसायबाट उत्पादन सुरु, सहकारी दिवसमा धेरै रचनात्मक कार्यको थालनी
३,११२ जना नमुना परीक्षण गर्दा थपिए ३०३ संक्रमित
काठमाडौं । चितवनको राप्ती नगरपालिका ११ मा मजदुर बोकेको ट्र्याक्टर पल्टिँदा ज्यान गुमाएका पाँच जनामध्ये चार जनाको परिचय खुलेको छ । राप्ती नगरपालिका ५ का ३५ वर्षका खडक लामा, खैरहनी नगरपालिका ९ का ४० वर्षीय मगन महतो, ५० वर्षीया छनिया महतो र राप्ती नगरपालिका ४ का ४५ वर्षका सीताराम श्रेष्ठको परिचय खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका अन्दाजी…
काठमाडौ । इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई हराएको छ। चेन्नईमा गएराति भएको खेलमा कोलकाताले हैदराबादलाई १० रनले हराएको हो । कोलकाताले दिएको एक सय ८८ रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक सय ७७ रन मात्रै बनाउन सक्यो । हैदराबादका मनिष पाण्डेले ६१ र जोनी ब्रेस्टोले ५५ रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन…
प्रदेश १ मा शनिबार थप २१ जनामा कोरोना संक्रमण
स्व. कर्णबहादुर स्मृति प्रदेश स्तरीय प्रथम भेट्रान कपको उपाधि आयोजक दूधे भेट्रान क्लबकोे पोल्टामा
प्रदेश नं.१ सरकारद्वारा विदाको सूची सार्वजनिक
बोलेरो दुर्घटना हुँदा ओखलढुङ्गामा तीन जनाको मृत्यु
पुरुषसरह काम गर्न सक्ने बनाउन अलैंची व्यवसायी महिलालाई बिर्तामोडमा क्षमता अभिबृद्धि तालिम
नेप्से झिनो अंकले घट्यो, सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने बढ्यो
बुट्टाबारीमा मोटरसाइकल दुर्घटना, चालककोे मृत्यु
आर्दश चोकमा महिला नेतृत्व तथा क्षमता विकास तालिम सम्पन्न
चन्द्रगढीमा महिला कानुनी साक्षरता प्रशिक्षण सम्पन्न
मलेसियालगायत विभिन्न देशबाट ल्याइयो १७ शव, बाबुराम शव बुझ्न पुगे
कोरियामा औद्योगिक दुर्घटनामा एक नेपालीको मृत्यु
झापालीले मुक्ति चोकमा भेट्न बोलाए
Ghode Jatra celebration at Tundikhel